Iza no afaka misitraka ny famatsiam-bola ataon'ny Tany Meva?
Ireo voafantina :
3.1 – Fikambanana ara-piarahamonina, VOI, Fikambanana ara-dalàna amin’ny faritra voatondro sns …
3.2 – Ireo fikambanana tsy miankina izay miantsehatra amin’ny fampandrosoana maharitra amin’ny faritra izay voatondro.
3.3 – Ivon-toeram-pikarohana na
fanofanana ary ny sehatra tsy miakina ka mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana.
Afaka mangataka famatsiam-bola ireo arak’ireto fifantenana manaraka ireto :
Taona nijoroana Teti-bola ( Ariary) Fanamarinana
Mpitondra tetikasa manana fanamarinana ara-dalàna. 15 000 000 Ariary N/A
Roa taona nijoroana ary manana traikefa heritaona. Ambonin’ny 15 000 000 na mitovy na latsakin’ny 60 000 000 Ariary N/A
Mpitondra tetik’asa nijoro mihoatra ny roa taona ary manana traikefa roa taona amin’ny lohahevitra atolotra. Ambonin’ny 60 000 000 Ariary na mitovy na latsaikin’ny 120 000 000 Ariary Miaraka amin’ireo filazana ara-bola tao anatin’ny roa taona farany izay nahazo fankatoavana avy tamin’ireo mpikambana tao amin’ny filan-kevim-pitatanana nandritra ny fivoriana tsy tapaka.
Mpitondra tetik’asa nijoro mihoatra ny roa taona ary manana traikefa dimy taona amin’ny lohahevitra atolotra. Amboin’ny 120 000 000 Ariary na mitovy na latsakin’ny 300 000 000 Ariary Filazana ara-bola an’ireo roa taona farany izay nataon’ny mpitantana na ny orinasa sy ny fanamarinam-bola voaorina.
Ahoana no ahazahoana famatsiam-bola?
Isan-taona, Tany Meva dia manao fiantsoana famatsiam-bola hoan’ny tetik’asa. Izay mpitondra tetik’asa liana dia mamaly ary manome ireo atotan-taratasy rehetra ilaina. Anjaran’ny Tany Meva ny manohy ny fifantenana ny tetik’asa
Oviana no misy famatsiam-bola tetik'asa manaraka?
Tolotra manaraka, araho ny rohy: https://tanymeva.org/mg/fiantsoana-firotsahana-2/
Mandray ireo fangatahana fanohanana ve i Tany Meva?
Eny, raha toa ka mifandraiky amin’ny asa tohanana iantsorohan’ny Tany Meva ny fangataha.